Ikamelo elikhulu elinendlu yokugezela enkulu eduze kwesikhumulo sezindiza - I-Airbnb
Ikamelo elikhulu elinendlu yokugezela enkulu eduze kwesikhumulo sezindiza
Ikamelo e-izindawo zokuhlala e-cuba ibungazwe ngu-Evelyn
Leli gumbi eliseNaul, eNorth County Dublin lilungele umuntu onemoto njengoba liwuhambo lwemizuzu eyi-15 kuye kwengama-20 kuphela ukuya eDublin Airport futhi kuyimizuzu engama-35 kuphela ukuya edolobheni laseDublin. Igumbi lingase lingamlungeli umuntu ongenamoto ngoba nakuba iNaul inesevisi yamatekisi enhle kakhulu, isevisi yamabhasi yangasese exhuma iNaul nenkonzo yamabhasi omphakathi e-Balbriggan (10km ukusuka eNaul) ayivamisile njengenkonzo yamabhasi omphakathi. . I-Balbriggan (10km kude neNaul) nayo inesevisi yesitimela enhle kakhulu.
Ikamelo yikamelo elikhulu elinethezekile elilodwa kwi-bungalow evulekile enendawo yayo yokuhlala ene-TV (kuhlanganise ne-Netflix) kanye netafula lokudlela / lomsebenzi. Nakuba igumbi linegumbi lokugezela lalo elikhethekile phakathi nemikhawulo ye-Covid-19, manje njengoba imikhawulo isibe khona indlu yokugezela ingase ihlanganyelwe nesinye isivakashi esihlala kwelinye ikamelo.
Nakuba igumbi lingenalo ikhishi alinayo iketela, i-toaster ne-microwave, kanye nefriji eligcinwa ehholo (ngenxa yezizathu zomsindo). Itiye nekhofi nakho kuyatholakala. Nakuba singanikezi izivakashi zethu isidlo sasekuseni esiphekiwe, sishiya ubisi, isinkwa, i-ham, amaqanda kanye noshizi esiqandisini uma kwenzeka izivakashi zingenalo ithuba lokukhetha okuthile kokudla kwasekuseni ekuseni okulandelayo.